’मिस्टर भर्जिन– तीन यौन प्यासीको एक कथा !
गफगाफ- नेपाली समाज यौनको विषयमा खुलेर बोल्न कोही पनि चाहदैन । यौनको कुरा गर्दा मुख छोप्नेको सङख्या अहिले पनि धेरै छ । अझ नेपाली चलचित्र इतिहासलाई हेर्ने हो भने यौन मनोविज्ञानको विषयमा निर्माण भएको चलचित्र निकै कम छन् । आजबाट नेपाली सिनेमा घरमा यौन मनोविज्ञानको विषयलाई उठाइएको चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’ प्रदर्शनमा आएको छ ।
बिहीबार राजधानीमा आयोजित मिस्टर भर्जिनको पत्रकार सम्मेलनमा बिशारद भन्छन् ‘ यो साता (भदौ १ गते) चार नेपाली, दुई बलिउड र एक हलिउड गरी सात चलचित्र प्रदर्शन हुदैँछ । नेपाली चलचित्र मध्ये हाम्रो सिनेमाले सर्वाधिक सो पाएको छ । यस कारण पनि हाम्रो टिमलाई हौसला मिलेको छ ।’
चलचित्रको कथाको बारेमा बोल्दै उनी भन्छन् ‘मिस्टर भर्जिनले तिन वयस्क युवकको कथा बोल्छ । यौन मनोविज्ञानमा आधारित यो चलचित्रका तीन पात्र हाम्रा समाजको पात्र हो । समाजका कथासँगै हाम्रो युवा अवस्थाको कुरा, हामी भन्दा ठूला र हामी भन्दा सानाका कुराहरूलाई समेटिएको छ । जुन कुरालाई हाम्रो जीवनमा पनि रिलेट गर्छ । मानिसले बिताएको हरेक पलहरू, जब उसको उमेर पुग्छ र उमेरको हिसाबले हरेक कुरामा परिवर्तनमा आउँछ । उसले यौनको बिषयालई कसरी सोच्छ ? आफ्नो यौन चाहनालाई परिपूर्ति गर्नेलाई ती समाजका तीन पात्रले कस्तो प्रकारको अवरोधहरूको सामना गर्नु पर्छ ? चलचित्रले यही कुरालाई बोल्छ । ’
वल्र्ड वाइड फिल्मस् डिस्ट्रिब्यूसनको ब्यानरमा निर्माण भएको यो चलचित्रलाई विशारद बस्नेतले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा गौरव पहारी, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, मरिश्का पोख्रेल, भोलाराज सापकोटा, रविन्द्र झा, सिर्जना सुब्बा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । ‘मिस्टर भर्जिन’मा खिलेन्द्र तिमल्सिना, प्रजापति सिवाकोटी, मुकेश रेग्मी र बिशारद बस्नेतको लगानी रहेको छ भने सह निर्मातामा सन्दिप उप्रेती, टिका पुलामी मगर र हेम प्रसाद दवाडी रहेका छन् ।